Horseradish | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Na-arụ ọrụ na-ewe ihe ubi horseradish maka oyi
N'ime oge oyi nke onye nnabata ọ bụla, e nwere efere ndị e tinyere na horseradish. N'ihi ọnụnọ nke akwukwo nri nke nnukwu vitamin na mmanụ dị oké mkpa, mgbọrọgwụ a nwere ihe ngwọta. E nwere ọtụtụ narị ụzọ iji esi nri horseradish. A na-eji mgbọrọgwụ eme ihe na nri. Tụlee ụzọ ndị dị mkpa maka nkwadebe horseradish maka oyi.
Atụmatụ na-eto eto horseradish: kere ma na-elekọta
Horseradish bụ ahịhịa perennial nke ezinụlọ Cabbage. Differs fleshy oké mgbọrọgwụ, ogologo branched azuokokoosisi, nnukwu epupụta. N'ala nna horseradish - South Europe, taa na-ekesa na Asia, Europe (ma e wezụga ebe okpomọkụ) na America.
Esi esi esi nri ncha maka oyi n'oge obibi
A ga-eji efere osere na-eri ọtụtụ efere, nke, na-ekele otu n'ime ihe ndị e ji eme ihe, ka a na-akpọ aha "crap". Na ndụ kwa ụbọchị, ha ka mara ya dị ka onye na-atụ egwu, onye na-azụ ahịa ịnyịnya, na-ese anya, Siberian adjika, cobra, nri nsị. Ma n'agbanyeghi aha aha ndi mmadu gbaliri igosi uzo nke ihe ndi ozo, ihe ndi ozo na uto ya adighi agbanwe agbanwe.